“प्रतिष्पर्धा एजेण्डाले हो, चुनावी आरोप अर्थहिन, जीतमा जनताको विश्वास गाँसिएको छ, पहिले भन्दा वढि मतले जित्छु” :भट्टराई(video) – Online Annapurna
“प्रतिष्पर्धा एजेण्डाले हो, चुनावी आरोप अर्थहिन, जीतमा जनताको विश्वास गाँसिएको छ, पहिले भन्दा वढि मतले जित्छु” :भट्टराई(video)
११ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:११ November 27, 2019 209 Views
by:aarju:- “संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो, जीन्दगीमा हार जीत भईरहन्छ” – विद्या भट्टराई
“संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो, जीन्दगीमा हार जीत भईरहन्छ”
कास्की क्षेत्र नं २ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार विद्या भट्टराईले निर्वाचनको समयमा लगाईने अर्थबिहिन आरोपहरुलाई परै राखेर जनताको तन मत जितेर एजेण्डासहित जनताका घर आगनमा गएकोले आफ्नो जित सुनश्चित भएको दावि गर्नुभएको छ । उहाँले सबै वडाका जनतासंग भेटघाट गर्दा सबैको एउटै भनाई छ :“हामीलाई रवीन्द्रको अभाव कहिल्यै पनि हुन नदिनु ।”
रवीन्द्र अधिकारीको अकल्पनिय दूर्घटनापछि उहाँले जित हाँसिल गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य कास्की क्षेत्र नं २ को रीक्त स्थानमा मंसिर १४ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन परिस्थितिले निम्त्याएको निर्वाचन हो, मलाई पार्टीले विश्वास गर्यो, मसंग योग्यता पनि छ, भट्टराईले भन्नुभयो :“तपाँई नै हो योग्य उम्मेदवार भनेर पार्टीले निर्णय गरेपछि मैले नाई भन्ने ठाउँ पनि रहेन, मेरो राजनीतक जीवन ७ कक्षाबाटै शुरु भएको पार्टीलाई थाहाँ छ, पछिल्लो समयमा म निरन्तर १७ वर्ष प्राध्यापन पेशामा रहें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पार्टीको राजनीतिमा संलग्न हुँदै आईरहेको पनि हो ।”
“निर्वाचनको बेलामा अनेक किसिमका प्रश्नहरु आएका छन्, आरोपहरु आए, ति आरोपहरुको जवाफ दिनुपर्ने छ तर मलाई त्यस्तो कुनै अफ्टेरो भएको छैन, किनभने जहाँजहाँ गएँ, त्यहाँत्यहाँ जाँदा सबैको आर्शिवाद पाईरहेको छु, शहरमा नीतिगत खाँचो पाईएको छ भने शहर बाहिर विकासको अवसर खोजिरहेको मैले पाएँ”, भट्टराईको भनाई ।
निर्वाचन भनेको जनताको कामसंग गाँसिएको कुरा हो, जनताको आवस्यक्ता पूरा भएन भने फेरी जनताको माझमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन, भट्टराईले भन्नुभयो :“मैले जतिपनि बोलिरहेको छु, एजेण्डा भित्र बसेर बोलिरहेको छु, राजनीतिक मुद्धाहरुमा केन्द्रीत भएको छु । प्रतिवाद गरेर समय खर्च गर्ने काम मेरो होईन ।”
रेडियो अन्नपूर्णको पोखरा भित्रको कथा कार्यक्रममा सहकर्मि दीपेन्द्र श्रेष्ठसंग कुराकानी गर्दै भट्टराईले राजनीतिक बिरासतको आडमा अगाडी वढ्ने होला भन्ने आरोप पनि उठाईएको छ, मलाई त्यस्तो अफ्ठेरो केहि लागेको छैन, रवीन्द्रको पत्नी हुन पाउँदा मलाई गर्व छ, म राज्यको एक सचेत र सक्षम नागरीक पनि हुँ । समावेशी राज्य व्यवस्थाको व्याख्या भित्र के विद्या भट्टराई अटाउँदैन ? उहाँले भन्नुभयो ।
काजक्रियाका बारेमा पनि आलोचना गरियो, नेपालको संविधानले धर्म संस्कृतिलाई स्वईच्छिक मानेको छ, यो समय अनुसार परिवर्तन पनि हुँदै जान्छ, संस्कृति र समाज समय अनुसार परिवर्तन हुन्छन् र समय सापेक्ष हुँदै जान्छन् उहाँले भन्न्ुभयो :“लामो समयसम्म काजक्रियामा बसेर झन् दुःखमा बस्ने भन्दा वढिमा ७ दिन वा तीन दिनमा सके हुन्छ भन्ने विचार रवीन्द्रको थियो । उहाँले देशका विज्ञ, ज्ञाताहरुसंग छलफल पनि चलाउनु भएको थियो । उहाँ रहनु भएन तर हामीले आफैंबाट शुरु गर्यौं, त्यो पनि परिवारको सहमति र छलफलबाट भएको हो ।”
“सबैको साझा उम्मेदवार हुँ”
नेपालमा जतिबेला एकल महिलाको आन्दोलन चल्यो, कस्तो थियो अवस्था कास्कीको ? सबैलाई थाहा छ, रातो पहिरणमा बााहिर निस्किन नसकेका महिला दिदि बहिनीलाई अहिले हेर्नुस् त त्यो अवस्था छ ? कास्की र नवलपरासिबाट भएको सामाजिक आन्दोलनको रुप अहिले कस्तो भयो ? उहाँले भन्नुभयो :“मलाई कत्तिपनि आपत्ति छैन, मलाई त यस्तो भन्न मन लागेको छ कि म एउटा पार्टीको मात्रै उम्मेदवार होईन, सबैको साझा उम्मेदवार हुँ ”
हामी राजनीतिक अभ्यासको क्रममा पनि छौं, रुपान्तरीत हुन बाँकि छ । आरोपहरु त आईरहन्छन् जस्को खण्डन गरिरहन जरुरी हुँदैन, समयले आफैं बताउँदै जान्छ । जनताको संमृद्धि एकै पटक हुँदैन । २० औं वर्षमा नभएका कामहरु दुई वर्षमा पनि भएका छन् । ४० वर्षसम्म रोकिएको पोखरा विमानस्थलको काम अगाडी वढेको छ । यसै समयमा हाम्रो निर्यात वढिरहेको तथ्यांकले देखाईरहेको छ, नेपालमा लगानिको वातावरण बनेको छ, उहाँले भन्नुभयो :“नियम कानून लागु गर्दै छौं निरास हुनु नै पर्दैन ।”
मेरो जीत निश्चितत भएको छ । जनमतलाई हेर्दा राम्रोसंग चुनाव जित्छौं । म कति मतको फरकले जित्छु भन्दापनि हिजोको मत भन्दा वढ्ने नै देखिन्छ । आठवटा वडा त हामीले नै जितेका हौं, कहि विचलन देखिएको छैन । जताततै रवीन्द्रको अभाव भएको पाएको छु, त्यसैले जित्ने आधार बलियो भएको छ ।
नेकपा बलियो भएर पो लागेको छ । कांग्रेस गु्टबाट एक भयो तर हामी दुई ठूला पार्टी एक भएर झन् ठूलो भएका छौं, यो त अहिले चुनावमा देखिएको व्यवस्थापनले नै देखाएको छ । ४६ वर्ष कि भएँ जीवन गतिशिल हुँदो रहेछ, म काठमाडौंमा जन्मेको हुँ, मेरो आमातिर जन्मेका ६ सन्तान मध्य ४० वर्षमा म जन्मेको एक मात्र जिवित छु । हामी मध्यम परिवारको हो । माईती पहिले सिन्धुली हो ।
गीत पनि गाउनु भयो कुराकानि बिचैमा । “संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो, जीन्दगीमा हार जीत भईरहन्छ ।” यो पंक्ति सुनाउनु भयो । कक्षा ७ मा पढ्दा राजनीतिमा लागेको बताउनु भयो । विद्यालयमा अनेरास्ववियूको कमिटि रहेछ, काकाको छोरा मार्फत अनेरास्ववियूमा जाने बाटो भयो । हामी दशौं स्थानसम्मका विद्यार्थीलाई कमिटिमा लग्ने लगियो । स्कुल परिसर सफा गर्ने, पुस्ुतकालयमा जाने, साथीहरुसंग भेटघाट हुने वातावरण वढदै गयो । क्याम्पस पढ्नको लागि पद्यम कन्या क्याम्पसमा पढ्ने निधो भयो र हामी चार पाँच जना भर्ना भयौं ।
रवीन्द्र जीसंग ५० साल पछि भेटेको हो । देखादेख त २०४८ मा भएको हो । २०५९ बाट प्राध्यापन पेशामा लागे । १७ वर्ष प्राध्यापनमा रहें, स्थायी भएको पाँच वर्ष भएको थियो परिस्थितिले मलाई यहि समयमा अवसर र चूनौतीको संघारमा उभ्याई दियो ।
जे जस्ले चाहनु हुन्छ, सम्पति छानविन गर्नुस्, सघाउँछु
वाईड बडि, एनसेल, केके काण्डका कुरा उठेका छन्, म जवाफ दिनलाई कठिनाई छैन, यसको गहिराईमा आरोप लगाउनेहरु पनि जानुपर्छ, सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने बारेमा सबै खुल्ला छ, जस्ले जेजे गर्न चाहनु हुन्छ, त्यो गर्दा हुन्छ, म सहयोग गर्छु । र अन्त्यमा भन्छु “मैले गर्ने कुरा मात्रै बोलेको छु नगर्ने र नसक्ने बोलेको छैन । संभावना अध्ययन गरेर बोलेको छु । मैले देखेका मुख्य आवस्यक्ताहरु पहिलो त सडक निर्माण नै रहेछ, यस्मा जोड दिनुपर्ने छ । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक न्याय मुख्य कुरा हुन यिनको पक्षमा वकालत गरिरहने दृडता व्यक्त गर्दछु, भट्टराईले भन्नुभयो ।